BCNegra 2018. Nyowani edition yeiyo Nhema Novel Mutambo. Ndira 29 kusvika Kukadzi 4 | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Zviitiko, Mabhuku, Noticias
Mufananidzo: Don Winslow, James Ellroy, Louise Penny, naMassimo Carlotto.
Chiitiko chakaipisisa chegore negore chinosvika muBarcelona. Of Ndira 29 kusvika Kukadzi 4 isu tine chinyorwa chitsva cheBlack Novel Festival muBarcelona, BCBlack 2018. Gore rino munyori anotora kuraira sa commissioner Carlos Zanon mushure mekuonekana kwemutengesi Paco Camarasa muchinyorwa chakapfuura.
Yakatsaurirwa kushungurudzwa kwemarudzi ese pachiitiko ichi, mutambo uyu unosanganisira akateedzana e zviitiko zvemarudzi ese uye inosanganisirawo zvakajairwa awards. Gore rino mukundi we Pepe Carvalho Mubayiro es James ellroy, Rabid Imbwa yeNorth America nhema mabhuku, ichiperekedzwa nevamwe vake vanopfuura anoyemurika Don unokunda uye mamwe akawanda makuru epasi rese uye emunyika mazita mune rima mavara. Tinoongorora.
1 Carlos Zanón, muchengeti mutsva
2 James Ellroy, Pepe Carvalho Mubairo
3 Nyeredzi hurukuro naDon Winslow
5 Graphic enganonyorwa uye enyambo
6 Zvimwe zviitiko
Carlos Zanón, muchengeti mutsva
Zanon akatora chinzvimbo kubva kuna Paco Camarasa ndokutanga kuita semuridzi mune ino shanduro. Nebasa rakaoma re kumutsa Pepe Carvalho, Ndingadai ndakaronga kuiburitsa gore rino. Uye zvakare, ari kuisa pekupedzisa pane yake nyowani nyowani ichaonekwa muna Gumiguru. Akaratidza mukana wekuve nemutevedzeri wemuranda kuti amubatsire, sezvo achifunga kuti mutambo uyu iboka rekuyedza.
James Ellroy, Pepe Carvalho Mubairo
Iyo Mutambo juri inopa mibairo yegore rino kune James ellroy musi waFebruary 1. Kudanwa Imbwa Rabid o Dhiyabhorosi ezvinyorwa zveAmerica ndiwen hunhu mumanoveli ake iye. Yakatarwa ne kufa kunorwadza kwamai vake Mune humhondi husina kugadziriswa muna 1958, hupenyu hwake chaihwo, hwakanyanya uye hwakazara nenjodzi dzinofamba pamucheto wechisvo, inopfuura chero nyaya yake yekunyepedzera. Kupfuura zvinokurudzirwa kuverenga Makona angu erima, iyo zvino inobuda neshanduro nyowani, uye apo munyori anotiudza zvizere.
Na yakaoma uye yekucheka teregirafu maitiro uye haina kukodzera Kune vese vaverengi, ndiye musiki wechiso chakasviba, chakapara mhosva uye chakashata chekwake, Los Angeles. Mariri mavara akachena anofamba, kunyanya akaputswa uye anoparadza. Kuzivikanwa kwake kwakapararira uye kushandurwa kwake kuva munyori wevanhu vazhinji kwakauya kwaari nekutenda kuna mafirimu anoenderana yemaviri enhau dzake: L. A. Chakavanzika, Nyanzvi ye Curtis hanson yakaburitswa muna 1997, uye Iyo nhema dahlia, ndiani akatungamira Brian De Palma muna 2006 nekubudirira kushoma uye kunozovhenekwa pamutambo uyu neChishanu, Kukadzi 2.
Nyeredzi hurukuro naDon Winslow
Ichave iri Mugovera Kukadzi 3 muhurukuro ine mwero Antonio Lozano chinobata mufananidzo, munyori uye mutori wenhau. Iye anoremekedzwa munyori weAmerica, munyori wezita rakadai rinoremekedzwa sa Simba rembwa o Cartel, kana wekupedzisira, Uori hwemapurisa, achataura achirarama uye achinongedzera nezvechinyorwa chake chemufananidzo wezvakaipa. Yakasarudzika uye yakakosha mukana kune vese vanoyemura avo vari mamirioni.
Musoro uchakurukurwa muchinyorwa chino uchave wekushungurudza vanhukadzi, chikoro pamwe nemagariro. Pane wekutanga achataura mazita senge Lucia Lijtmaer, mutori wenhau uye munyori, Luisgé Martin, munyori, kana Elizabeth McCausland, mutori wenhau uye mutsoropodzi, akasarudzika mutsika dzakakurumbira uye zvevakadzi. Zvekudheerera ivo vachadaro Juan Carlos Barroso Sanchez, Lolita bosch, munyori, uye Graziella Moreno, mutongi uyezve munyori. Uye pane kushungurudzwa mumasocial network vanozoita nharo Jungle Orejón, nyanzvi yekuchengetedzeka nekutaurirana, Lorenzo Silva kana John Soto Ivars, munyori uye munyori.
Graphic enganonyorwa uye enyambo
BCNegra inoshanda pamwe Edhisheni Standard mune anthology BCN Noire rakagadziriswa naNorma, apo vanyori uye vanyori vezvinyorwa vanodzokorodza zvakasikwa zvechisimba, mhosva uye kuda mukati 23 nyaya yakagara muBarcelona.
Uye pachave zvakare ne tafura yakatenderera pane yakajeka graph game Sergi Alvarez, munyori wenhau uye munyori wenyaya; Jordi Bernett , comic bhuku muimbi uye akateedzana munyori Torpedo 1936; Ruben Pellejero, anozivikanwa nemutikitivha Dieter Lumpen uye zvakare anopawo hupenyu kuna Corto Maltese. Y Charles Salem, nyanduri uye munyori wenhau.
Zvakare zvinonakidza zvichave tafura yakatenderera pa matarenda ekumaodzanyemba noir Europe, avo vari kutsika pachivara chine nhema nemazita akafanana nemunyori Ignatius weMupata, musiki waArturo Andrade, Berna Gonzalez Harbour, munyori wemanoveli emuchengeti Ruiz uye weItaly Massimo carlotto, munyori uye munyori wemitambo, uye munyori weakavanzika mutikitivha akatumidza zita rekuti Cayman.
Uye zvakare kusimudzira hurukuro iyo ine mwero Berna Gonzalez Harbour pahunhu uye nekujeka mune nhema nhema pakati peArgentina Claudia Pineiro, munyori wenhau dzakabudirira dzakadai se Wako o Kutsemuka kweJara, uye canadian Louise peni, iyo inoisa mhosva dzayo mudiki nzanga dzeQuebec uye inovanza nzvimbo dzakaomarara kuseri kwenzvimbo yemabucolic. Mazita maviri akaunzwa semienzaniso yetarenda uye kutengeswa kweiyo genre mumativi maviri emakondinendi mamwe chete. Penny ndiye musiki weakaongorora Armand gamache.
Ruzivo rwakawanda mu BCBlack 2018.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » BCNegra 2018. Nyowani edition yeiyo Nhema Novel Mutambo. Ndira 29 kusvika Kukadzi 4